Ungangisiza ngethuluzi elingukhiye elingathembekile le-Amazon ukufakwa ohlwini kwenzuzo?
Ukuba nekhasi elihle lomkhiqizo elungiselelwe i-ecommerce SEO futhi lihlotshiswe ngethuluzi elingukhiye elihlelwe i-Amazon lisho ukuthi ungadonsela ukunakwa okuningi kubathengi abafuna izinto ezithengiswa ngaphezulu. Okuhle, ukuguqula isabelo sebhubesi lala maklayenti angakathuthuki kuba abathengi bangempela abenza ukuthenga nawe. Futhi ukubeka isethi ephelele ehambisanayo yamagama angukhiye asemqoka endaweni efanele kuzokusiza ngalokho. Yiqiniso, akekho ucwaningo lwe-niche oluzokwazi ukushayela isitolo sakho sokuhambisa phansi ekuphumeleleni ekugcineni, okungenani yedwa. Futhi kungakhathaliseki ukuthi kuhloswe kahle kangakanani kungenzeka. Ngisho ukuthi ukuba ngumdayisi owenza ngempela e-Amazon, kunezinto eziningi ezibalulekile okufanele ziqhubeke zibhekwa, zilungiswe futhi zicatshangelwe kaningi.
Ungasho ukuthi kufana nanoma yimuphi omunye umakethe wendawo wezitini nomthengisi, le platform online ecommerce ibhekwa ngokuyinhloko ngamanani okuncintisana, kanye negunya lomthengisi ngamunye ukuthembeka. Noma kunjalo, ngokucwaninga ngokujulile kwe-niche esebenzisa kahle ithuluzi elingukhiye le-Amazon, ungenza izinto zibe lula kakhulu. Ngemuva kwalokho, kungenzeka ukuthi yindlela kuphela eqinisekisiwe yokusetha ukugeleza okuqhubekayo kwabasebenzisi abaphilayo abavakashela njalo uma befuna ezinye izinto ozozithengisa. Ngakho-ke, ngezansi kukhona izinketho ezimbalwa ezinhle kakhulu ukuthi ukhethe ithuluzi lakho elingamagama eliyisihluthulelo e-Amazon kanye nedwala eligcwele indawo emakethe kanye nokufakwa kuhlu komkhiqizo wakho kuboniswe phezulu kokusesha komkhiqizo ngaphezulu.
Umsizi wokuqala we-intanethi ngingakusiza namhlanje ukuthi i-Keyword Tool Dominator. Phakathi kwezinhlangothi zalo eziqine kakhulu, kunesevisi ephakamisayo yegama eliyisihluthulelo elingenayo elingenayo elingakunika isithombe esikhulu samagama angukhiye afanele kanye nemishwana yokusesha ende ende esetshenziselwa abathengi bukhoma e-Amazon. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukwenza njalo ngokuqhubekayo, njalo uhlale ulungele ukufaka isicelo semibandela yokusesha ephakanyisiwe ekutholeni ukuthandwa kuze kube manje futhi kulindeleke ukuthi ube yinto evame kakhulu nangesikhathi. Ngesisekelo esiyisisekelo esitholakalayo ekufinyeleleni okuvulekile ungagijima kuze kube yimibono emithathu ekhethiwe yamagama angokhiye wansuku zonke. Futhi ungase ukhokhe ngokushesha amabhange angu-16 ukuze ujabulele inguqulo ephelele yamafutha weli thuluzi le-software.
Ngenye ithuluzi elingukhiye elihle le-Amazon, elisebenza ngokukhethekile uma kuqhathaniswa nokuqeda wonke amagama angukhiye angasebenzi imishwana - cishe ngaso sonke isikhathi. I-Scientific Seller iyithuluzi lamahhala le-intanethi ukusekela uhlu lwakho lomkhiqizo e-Amazon elinokuqonda okubalulekile okuncintisana nokusikisela okusemqoka okuyisisekelo esihlotshaniswa nento yakho noma isigaba somkhiqizo. Kodwa-ke, phawula ukuthi ukwenza okuningi ku-Scientific Seller Ngincoma kakhulu ukuthi uyayisebenzisa ngokuhambisana ne-Google's Keyword Planner. Ngaleyo ndlela, uzovimbela noma yikuphi ukuphazamiseka, njengokungabikho inani lezinombolo ezihlotshaniswa namagama angukhiye noma imisho emifushane yosesho ebonakala ingene ngokungalungile Source .